My 5 ingredients for helping children with Shona language learning - ZimbOriginal
2 thoughts on “My 5 ingredients for helping children with Shona language learning”
Hey matanga chinhu chakakosha. Asi madii kuzviita nemitauro yeZimbabwe. Kana zvichisandurwa zvoitwa nerurimi rwakasiyana kuti vamwewo vanzwe pane kuzvinyora nechirungu. Ndofunga hapangashayi vangade kupota vachibatsira kuturikira nemitauro yemuno.
Ndaongoda kuti ndipewo zano. Asi ndinomutenda nebasa guru iro matanga. Tichabatana tipane matma. Wakuru wakati, ‘Zvikomo zvingopana mhute’.
Tinotenda nemashoko enyu anokurudzira. Ndinogamuchira nekudzamisa pfungwa pese ndinopiwa mazano nevamwe; vakuru vakati ‘mazano marairanwa, zanondoga wakapisa jira.’ Ndinovimba kuti nerimwe zuva zimboriginal ichakwanisa kupa ruzivo ichishandisa mitauro mizhinji yomuZimbabwe.